Ị̀ ga-ekwenyerịrị n’Atọ n’Ime Otu iji bụrụ Onye Kraịst?
Ụlọ Nche | Febụwarị 2010
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maya Myanmar Norwegian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Zulu
▪ Otu akwụkwọ ọgụgụ ndị ụlọ akwụkwọ sekọndrị, bụ́ World Religions in Denmark, nke e bipụtara na 2007, kọwara Ndịàmà Jehova dị ka obere ìgwè Ndị Kraịst na-agbasochi Baịbụl anya. Nke bụ́ eziokwu bụ na Ndịàmà Jehova bụ okpukpe Ndị Kraịst nke atọ kacha buo ibu na Denmak.
N’agbanyeghị nke ahụ, otu bishọp Chọọchị Mba Denmak katọrọ nnọọ onye dere akwụkwọ ahụ maka ikpebi idenye aha Ndịàmà n’akwụkwọ ahụ. Ọ̀ bụ n’ihi gịnị? Bishọp ahụ kwuru, sị: “Ahụtụbeghị m ọkà mmụta okpukpe weere [Ndịàmà Jehova] ka Ndị Kraịst. Ha ekweghị n’Atọ n’Ime Otu, bụ́ ozizi bụ́ isi e ji mara okpukpe Ndị Kraịst.”
Onye dere akwụkwọ ahụ, bụ́ ọkà ná mmụta mmekọrịta okpukpe, nke aha ya bụ Anika Fitama, kwuru na mgbe a jụrụ ndị mmadụ ihe mere ha ji lee onwe ha anya ka Ndị Kraịst, ọ na-ara ahụ́ ha azaa na ọ bụ n’ihi na ha kweere na Chineke bụ Atọ n’Ime Otu. Ọzọkwa, otu ebe n’akwụkwọ ahụ nke isiokwu ya bụ́ “Ị̀ Bụ Onye Kraịst?” kwuru, sị: “Ozizi Atọ n’Ime Otu bụ otu n’ime nsogbu ndị ka taa akpụ e nwere n’ozizi Ndị Kraịst.” O kwukwara, sị: “Mgbe ụfọdụ, ọ na-esi ike ịkọwara Ndị Kraịst na-agụghị akwụkwọ ihe mere Chineke Ndị Kraịst ka ji bụrụ otu chi kama ịbụ chi atọ.”
Ihe Baịbụl na-akụzi banyere Chineke na Jizọs doro anya. O sighị ike nghọta. Ma “Atọ n’Ime Otu” ma ihe ọ bụla na-akwado ya adịghị n’Okwu Chineke. Baịbụl kwuru hoo haa na Jizọs Kraịst bụ Ọkpara Chineke, bụ́ onye e bu ụzọ mụọ. (Ndị Kọlọsi 1:15) O kwukwara na Jizọs bụ “onye ogbugbo n’etiti Chineke na mmadụ.” (1 Timoti 2:5) Baịbụl kwuru banyere Nna ahụ, sị: “Gị onwe gị, onye aha gị bụ Jehova, ọ bụ naanị gị bụ Onye Kasị Elu n’ụwa niile.”—Abụ Ọma 83:18.
Ndịàmà Jehova kweere na ọ dị ezigbo mkpa inwe okwukwe na Jizọs. (Jọn 3:16) N’ihi ya, ha ji nnọọ iwu a Jizọs nyere kpọrọ ihe: “E dere, sị, ‘Ọ bụ Jehova bụ́ Chineke gị ka ị na-aghaghị ife ofufe, ọ bụkwa naanị ya ka ị na-aghaghị ijere ozi dị nsọ.’” (Matiu 4:10) N’ezie, e nwere ike ịkpọ onye na-agbalị irubere iwu Jizọs isi Onye Kraịst.
“Ozizi Atọ n’Ime Otu bụ otu n’ime nsogbu ndị ka taa akpụ e nwere n’ozizi Ndị Kraịst”
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ị̀ ga-ekwenyerịrị n’Atọ n’Ime Otu iji bụrụ Onye Kraịst?
Ịchọ Eziokwu Banyere Eluigwe
Olee Otú Eluigwe Dị?
“Ndị Na-arụ Ọrụ n’Ụlọ”
Ì Kwesịrị Idebe Ụbọchị Izu Ike Kwa Izu?
Banyere Ezi Ofufe
Chineke Ò Nwere Ike Inwe Mwute?
NDỊ NA-AGỤ AKWỤKWỌ ANYỊ NA-AJỤ, SỊ Ị̀ ga-ekwenyerịrị n’Atọ n’Ime Otu iji bụrụ Onye Kraịst?
KỤZIERE ỤMỤ GỊ IHE Ribeka Dị Njikere Ime Ihe Dị Jehova Mma
IHE NDỊ NA-EME KA E NWEE OBI ỤTỌ N’EZINỤLỌ Gị na Ndị Ọgọ Gị Ma Ọ Bụ Nne na Nna Di Gị Imekọ Ihe
E Zigara Ndị Na-ekwusa Ozi Ọma n’Ala Ọzọ “n’Ebe Kasị Anya n’Ụwa”
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE Febụwarị 2010
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ỤLỌ NCHE Febụwarị 2010
ỤLỌ NCHE Febụwarị 2010